Home > COVID-19 Information > Information For OMC Patients > March 16, 2020 - Message to our Patients > Maarso 16, 2020 - Fariin Ku Socota Bukaanka
Waxaanu la soconaa in adiga iyo qoyskaagu aad dareen ka qabtaan cudur keenaha COVID-19. Waxaanu dooneynaa in aadogaato in fayo qabka iyo nabadgelyadooda sshaqaalaha, bukaanka iyo bulashada aad noogu weyn tahay. Muddada lagu jiro xaaladdan sida degdegga ah isu bedeleysa ee COVID-19, waxa aan halkan u joognaa in aan idin caawino. Dhamaan goobaha OMC waa ay furnaanayaan saacadihii caadiga ahaa ee shaqada si ay ugu adeegaan bukaanka.
Maxay OMC Qabaneysaa?
Xilliga ay xaaladdu si degdeg ah isu bedeleyso, OMC waxa ay la soconeysaa waxyaabaha dhacaya iyada oo gacansaar dhaw la leh Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Minnesota (MDH), Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Olmsted, Mayo Clinic iyo inta kale ee ka qeyb qaadaneysa talo soo jeedinta iyo u diyaar garowga COVID-19.
Xagee Laga Helaa Macluumaad?
Si aad u hesho macluumaadkii u dambeeyey ee OMC soo booqo Bogga COVID-19 ee bogeena internetka.
Ma waxaa laga iga doonaayaa in aan joojiyo balamada dhakhtarka?
Haddii aad xanuunsan tahay oo aad isku aragto hargab ama calaamado la xiriira neefsiga, waxaanu kaa codsaneynaa in aad guriga joogto ilaa aad u baahan tahay dhakhtar inaad aragto.
Haddii caafimaadkaagu wanaagsan yahay, waxaa jirka habab kale oo aad dhakhaatiirta kula xiriir karto, sida telefoonka, booqashada internetka, iyo in aad fariin u dirto. Haddii aad kuu fidin karno daryeelka caafimaadka adiga oo aan imaan OMC, waan kula soo xiriireynaa. Fadlan nala soo xiriir si aan kaalatalino sida aad dhakhtar ku arki karto adiga oo aan baajin balanta dhakhtarka.
Maxaad yeeleysaa haddii aad kashakisan tahay in covid-19 kugu dhacay?
Calaamadaha sida badan lagu garto COVID-19 waa qandho, qufac, neefta oo kugu yaraata ama kugu adkaata. Haddii aad isku aragto calaamadahaas oo aad waddanka dibadda uga baxday ama aad tagtay magaalooyinka waaweyn bishii lasoo dhaafay, ama aad la xiriirtay qof laga helay cudurka COVID-19 la xiriir dhakhatarkaaga. Kalkaaliye caafimaad ayaa qiimeynaya calaamadaha aad isku argtay oo kuu tilmaameysa meesha aad daryeel ka heli karto.
Ha tagin gargaarka degdegga ah si lagaaga baaro COVID-19. Hase yeeshee, haddii ay neeftu ku qabaneyso, feeruhu ku xanuunayaan, dareemeyso madax wareer, madax xanuun, ama aad dareemeyso in naftaadu khatar ku jirto, wax 911 ama toos u tag isbitaalka gurmadka degedgga ah.
Waxaa muhimadda koowaad noo ah caafimaadka bukaanka.
Caafimaadkaagu waa muhim waxaanan dooneynaa in aad dareento kalsooni iyo badbaado marka aad timaado isbitaalka. Waxaa kale aad ogaataa in si joogta ah dhismaha loo nadiifiyo oo lagala dagaalamo cudur sidayaasha. Fayo qabka bukaanka iyo dadka soo booqanaya isbitaalka waa mid aad noogu weyn.
Waxaanu idinkaga mahdcelineynaa kalsoonida aad ku qabtaan Xarunta Caafimaadka ee Olmsted. Waxaa naga go’aan in aanu ilaalnu nabadgelyadiina inaga oo idiin fidineyna daryeelka caafimaad ee ugu sareeya ee aad naga fileysaan.
Donald T. Bodeau, MD
Jennifer C. Spanbauer, DO
Erin L. Tiu Tong, APRN, CNP